iOS6to 6.1 ကို Untethered Jailbreak လုပ်နည်း (Tutorial) – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Zico: The Official Game Gallery Pro v1.1.1 apk (630 Kb) WhatsApp Messenger 2.9.7312 for android(latest version) Frozen Keyboard Pro v 0.5.3 for android Gmail sign in ၀င်လျှင်ဖြစ်တတ်သော Can't establishareliable data connection to the server error အားဖြေရှင်းခြင်း Home
Published On: Mon, Feb 4th, 2013 iOS jailbreak tutorials / iOS tutorials / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By သက်နိုင်စိုး iOS6to 6.1 ကို Untethered Jailbreak လုပ်နည်း (Tutorial)
Evad3rs jailbreak tool for iOS 6-6.1 အားရယူ၇န်
အဆင့်(၂)။ ။ download လုပ်လို့ရလာတဲ့ ဇစ်ဖိုင်ထဲက evasi0n.exe file ကို run ပါ ။
အဆင့် (၉)။ ။ Jailbreak process ပြီးပြီဆိုရင် “Exit” ဆိုတဲ့ button ပြပါလိမ့်မယ်။ iDevices Screen မှာလည်း “Done” ဆိုတဲ့ Warning ပြပါလိမ့်မယ်။iPhone/Pad/Pod touch ဟာ reboot ဖြစ်သွားပါမယ်။ reboot နှစ်ခါလောက်ကျပါတယ်။ နည်းနည်းစိတ်ရှည်ပေးပါ။
Gmail sign in ၀င်လျှင်ဖြစ်တတ်သော Can’t establishareliable data connection to the server error အားဖြေရှင်းခြင်း
Samsung galaxy S3(GTI9300) သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ..
21 comments on “iOS6to 6.1 ကို Untethered Jailbreak လုပ်နည်း (Tutorial)”	aung khaing on February 4, 2013 at 7:13 pm said:
friend, how i install myanmar font and keyboard, help me pls.
Reply ↓	K Zaw on February 5, 2013 at 4:14 pm said:
အကိုရေ http://myanmarmobileapp.com/category/ioskeyboard/ လင့်မှာ ios 5.1.1 မြန်မာစာ ကီးဘုတ်ထည့်နည်းအတိုင်းထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။
Reply ↓	marlarwontha on February 5, 2013 at 12:17 am said:
Reply ↓	KSA on February 5, 2013 at 2:26 am said:
ကျေးဇူးပဲ ကိုပိုးညို… Share တွားပီ Reply ↓	AP on February 5, 2013 at 2:58 am said:
iPhone4S, iPhone5& New iPad တွေမှာရော..လုပ်လို့ရပြီလား…
Reply ↓	Nickyphyo on February 5, 2013 at 8:11 am said:
Iphone5s Mar Tot Ya Pi..:P
Reply ↓	Nyan Gyi on February 5, 2013 at 11:31 am said:
Finding offsets လို့ပေါ်ပြီးဆက်မတက်တော့ဘူး
Reply ↓	axiom on February 5, 2013 at 3:28 pm said:
iphone5 ka 6.0 mharasin ma pyay pa buu
Reply ↓	K Zaw on February 5, 2013 at 4:11 pm said:
ကျေးဇူးပါပဲအကိုရေ ရှောရှောရှူရှူပဲ ရသွားပါတယ်ခင်ဗျ။ မြန်မာကီးဘုတ်ကျတော့ 6+ နဲ့ပဲ သွင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲမှားကိုရှာမတွေ့ပဲ ‘ ကိုနှိပ်တော့းပြန်ထွက်လာပါတယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။
Reply ↓	wayone on February 5, 2013 at 4:27 pm said:
ipad mini မှာ JB လုပ်တာရသွားပါပီ…ဒါပေမယ့်.. game တွေ application တွေ သွင်းတာ မရလို့ပါ… သွင်းပီး အဲဖိုင်ကိုဝင်လိုက်ရင် မရဘဲ ပြန်ပြန်ထွက်သွားတယ်…..
Reply ↓	xaio, on February 6, 2013 at 12:37 pm said:
sa ya lote tal lo ma htin pa nal.ios app hmar crack nal copyright so tarr2myo shi pa tal.copyright so mi mi ko tai app store ka buy htarr mha install lote lo ya mhar.crack ka cydia ka app sync for ios 6+ ko install lote mhaasin paya twar mhar
Reply ↓	နန္ဒ on February 24, 2013 at 5:49 pm said:
မြန်မာဖောင်.ရော jailbreak ရောရပီ နောက်ဆုံးပိုင်း Android Lock – XT Crack တို. Barrel Crack တို. Install လုပ်မရဘူး ဖြစ်နေတယ်..
Reply ↓	အနီ on February 6, 2013 at 12:22 pm said:
ipad2မှာလုပ်တာcydiaတော့ရသွားတယ် manage account ထဲဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် အကောင့်တွေလုပ်ခိုင်းတာ rock id ထခိုင်ဲး့လို့ အဲကနေမကျော်နှိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကူညီကြပါအုံးနော်
Reply ↓	kojpeg@gmail.com on February 7, 2013 at 3:56 am said:
အဆင့် ၇ မှာတစ်နေတယ်ဗျ…jailbreak icon ပေါ်မလာဘူးဗျ..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…ပြောပြကြပါဦး…
Reply ↓	Ko Phyo on February 7, 2013 at 8:51 am said:
အတူတူ ပဲ ဗျို့ …. ကျွန်တော်လဲ အဆင့် ၇ မှာ တစ်နေတယ် .. jailbreak icon ပေါ်မလာဘူးဗျ
Reply ↓	Aung Moe on February 7, 2013 at 6:12 am said:
IOS 6.1 မှာ 3GS အတွက် Network Unlock ရပြီလား ပြောပြပေးပါဦးဗျာ။ Upgrade လုပ်ပြီးမှ မရမှာစိုးလို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply ↓	Nyi htut on March 5, 2013 at 5:11 pm said:
New ipad ကို jailbreak လုပ်ပြီး. ခဏခဏ. Restart. ကျနေတယ်. Game. တွေထဲကိုဝင်ရင်. ပြောပြပါဦး
Reply ↓	Sai Num Town on March 27, 2013 at 8:54 am said:
iphone5 6.02 မှတေ့ာ ok တယ်ဗျာ ကျေးဇူးပဲဗျာ
Reply ↓	Ruth Phyu on May 13, 2013 at 6:29 pm said:
Hey ဒီ website http://goo.gl/Vuswb မှာနောက်ဆုံး version iOS 6.1.3 Jialbreak နည်းကိုသူ Tutorial ပြထားပါတယ်။
Reply ↓	Ruth Phyu on May 13, 2013 at 6:30 pm said:
Hey ဒီ website ► http://goo.gl/Vuswb ◄ မှာနောက်ဆုံး version iOS 6.1.3 Jialbreak နည်းကိုသူ Tutorial ပြထားပါတယ်။
Reply ↓	ချစ်ကိုဦး on May 20, 2013 at 1:28 pm said:
ကျွန်တော်ရဲ့ Iphone5မှာ Evad3rs jailbreak tool for iOS 6-6.1 အဲ့ဒီ ဆော့ဝဲလ်ကို Run ပြီး လုပ်တာ jaibreak tool လေးက မှိန်နေတယ် ဖုန်းနဲ့လဲ ချိတ်ထားပြီးပြီ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ ပြောပြပါအုန်း
Moe on Internet Download Manager 6.15 build 11kominnoung on How to Install Myanmar Font On Samsung Galaxy S4-i9500 & i9505-(Without Rooting)kaung khant kyaw on CDMA 800 Mhz SIM Card များနှစ်လအတွင်းချပေးပြီးလျှင် GSM,WCDMA နှင့် CDMA SIM Card များတစ်ပြိုင်နက်ချပေးမည်။kyawsoe(hinthada) on ဖုန်းဈေးနှုန်းများ ( Mobile Price)နေမျိုးကျော်ထက် on Wondershare MobileGo for Android 3.2.0 For Pc 25.49 MB Android Development